Pfupiso ye "Nhoroondo yezvikwiriso" naAntonio Buero Vallejo | Zvazvino Zvinyorwa
Encarni Arcoya | | Type, Mabhuku, Theater
Mubasa ra Antonio Buero Vallejo chigadzikiso chemufananidzo, «Nhoroondo yezvikwiriso», Zvizvarwa zvitatu zvinogara muchivako chimwe zvinoratidzirwa kumiririra kusagadzikana kwenzanga uye huripo muhupenyu hweSpanish muhafu yekutanga yezana ramakore rechiXNUMX. Masitepisi, yakavharwa uye inofananidzira nzvimbo, uye kufamba kusingakanganisike kwenguva kunofarira cyclical uye inodzokorora chimiro chinoratidzira kutadza kwevatambi.
1 Chiito chekutanga
2 Chiito chechipiri
3 Chiito chetatu
4 Zvinyorwa zve «Nyaya yemanera»
5 Musoro wepakati weNyaya yemanera
6 Mavara ari muNhau yemanera
6.1 Chizvarwa chekutanga Nyaya yemanera
6.2 Chizvarwa chechipiri
6.3 Chizvarwa chechitatu Nyaya yemanera
7 Maumbirwo enyaya
8 Zvinorehwa nemanera
9 Mashoko akanyorwa naAntonio Buero Vallejo
Chekutanga chiitiko chinoitika pazuva muna 1919. Carmina naFernando, vaviri vechidiki vanogara muchivako chine mwero, vanosangana pakumhara kana "kasinillo" yemasitepisi.
Chiitiko chechipiri chinoitika makore gumi gare gare. Urbano anokumbira Carmina kuti amugamuchire semurume wake. Elvira naFernando vakaroora.
Ichi chiito chechitatu chinoitika muna 1949, gore rakaburitswa mutambo. Fernando, mwanakomana waElvira naFernando, naCarmina, mwanasikana waUrbano naCarmina, vari murudo, asi vabereki vavo vakarambidza hukama uhwu nekuda kwekuvava nekushushikana kunokonzerwa nekutadza kwavo.
Zvinyorwa zve «Nyaya yemanera»
«Nhoroondo yezvikwiriso» mutambo (1947 na1948) naAntonio Buero Vallejo, waakatambira Mubayiro weLope de Vega. Yakatanga kuratidzwa kuSpanish Theatre muMadrid musi waGumiguru 14, 1949. Mairi, nzanga yeSpain, nenhema dzayo dzese, inoongororwa kuburikidza nemunharaunda ye ladder.
Musoro wepakati weNyaya yemanera
Nyaya yemanera inotaurira nyaya yevanhu vanoverengeka vari muhurombo uye mumazera avo ese, ramba uchichengetedza chinzvimbo icho, kunyangwe ivo vachida kubuda. Nekudaro, ivo havawani nzira yekubuda mumamiriro avo ezvinhu uye izvo zvinokonzera kushatirwa, shanje, kunyepa, kutsamwa ... pakati pevavakidzani vese pamasitepisi. Kunyanya kana paine wavo akasimuka.
Saka, Antonio Vallejo inotiratidza kushushikana, kuda kumira mushe kubva kune vamwe, uye kurwira mumakirasi epasi pasina kuwana mubairo zviri kukanganisa munhu, kumuita kuti ave neshungu uye kuita kuti zvese zvakashata mumunhu zvibudirire.
Dzimwe nyaya dzinobuda pachena dzinogona kuve chiratidzo chechokwadi chevanhu, saFernando, uyo achiri kuyaruka akarota kuti aizove mukuru uye akapfuma dhizaini; uye zvakadaro, sekufamba kwemakore, zvinoonekwa kuti anoramba achigara mumba iyoyo uye achiri murombo.
Neimwe nzira, munyori anoratidza kuti dzidzo nenzira yekurapa vana zvinovafurira kuti vadzokorodze maitiro mamwe chete anovatadzisa kubuda muhurombo ihwohwo.
Mavara ari muNhau yemanera
Sezvinoonekwa kubva pane zvambotaurwa, Historia de una escala haitarise chete kunguva imwe chete, asi asi inotenderera zvizvarwa zvitatu zvemhuri nhatu dzakasiyana uye maitiro avanoshanduka zvakasiyana. Nekudaro, kune akawanda mavara, asi imwe neimwe inowirirana nechizvarwa. Mune ino kesi, isu tiri kutaura nezve:
Chizvarwa chekutanga Nyaya yemanera
Mariri mavara ndeaya:
Don Manuel: Iye akapfuma hunhu anogara munzvimbo iyoyo asi, kusiyana nevamwe, anoda kubatsira vavakidzani vake nemari yaainayo. "Ziso rake rekurudyi" mwanasikana wake Elvira, dambudziko nderekuti uyu musikana asingabatsiri uyo, akararama muhupfumi, haazive izvo zvakakosha chaizvo.
Doña Mutsa (Asuncion): Iye ndiamai vaFernando, mukadzi anoita zvese zvaanogona kuti mwanakomana wake ave neupenyu hunofadza. Vazhinji vanofunga kuti akapfuma, asi pachokwadi ndiye murombo munzvimbo iyi.
Bale: Ndiye amai vevana vatatu, Trini, Urbano naRosa. Murume wake ndiVaJuan uye mukadzi ane masimba anoda kuchengetedza vana vake pasi pesimba.
Gregory: Akanga ari baba vaCarmina naPepe, asi anofa uye anoita mhuri mumamiriro anosiririsa.
Rupo: Iye mukadzi waGregorio, chirikadzi uye akasuruvara nekufirwa nemurume wake. Kunyangwe aine vana vaviri, waanofarira musikana.
Muchizvarwa chechipiri, makore akati wandei apfuura uye vana vakaonekwa mune vekutanga vakura. Iye zvino ivo vechidiki vechidiki vari kutanga kufamba kuburikidza nehupenyu vari vega. Saka, isu tine:
Fernando: Mukudanana naCarmina. Nekudaro, kuda kuve mumwe munhu, uye pachinzvimbo chekufunga pamoyo wake, anozviitira mari, saka anoroora Elvira. Izvi zvinoita, mushure mechinguva, anozvirova dundundu, uye simbe ... uye anorasikirwa nemanyepo ekurarama. Iye zvakare ane vana vaviri, Fernando naManolín.
Carmine: Carmina anotanga semusikana anonyara asingade munhu anovimba naye. Ari kudanana naFernando, asi pakupedzisira anozopedzisira aroora Urbano. Ane mwanasikana akatumidzwa zita rake.
Elvira: Elvira akakurira pakati pekuda nemari, saka haana kumboshaya chero chinhu. Nekudaro, ane godo nezve izvo Carmina anazvo.
Urbano: Zvinotendwa kuti akarurama mune zvese uye kuti anogona kuve pamusoro pevamwe nekuti anoziva zvakawanda. Ane hutsinye, asi anoshanda nesimba, anokwanisa uye pese paanogona anoedza kubatsira.
Pepe: Mukoma waCarmina. Iye murume uyo, sekufamba kwehupenyu, anowedzera kufufutirwa uye kudyiwa nahwo. Chekupedzisira, kunyangwe hazvo akaroora kuna Rosa, anofarira mukadzi uye chidhakwa.
Rosa: Ndiye hanzvadzi yaUrbano. Iye anoroora Pepe uye muchato wake unomutungamira kune hupenyu hunosiririsa, hwavanofira nahwo muhupenyu.
Trini: Iye anogara asina kuroora kunyangwe ari akanaka uye akanaka kune vamwe.
Chizvarwa chechitatu Nyaya yemanera
Chekupedzisira, chizvarwa chechitatu chinotipa vatambi vatatu, avo vakatotariswa mune yekutanga.
Fernando: Mwanakomana waElvira naFernando, akafanana chaizvo nababa vake maererano nekukwezva, kusanzwisisika, gigolo, nezvimwe. Anoda kuronga zveremangwana uye kupwanya kwake mwanasikana waCarmina, Carmina.
Manolin: Iye ndiye munin'ina waFernando uye anga achigara ari mudiwa wemhuri, saka pese paanowana mukana anosangana naFernando.
Carmine: Iye ndiye mwanasikana waCarmina naUrbano, aine nzira yekufananidzwa chaizvo naamai vake muhudiki hwake. Iye anodawo Fernando, asi mhuri yake haidi kuti ave nehukama naye.
Nyaya yezvikwiriso ine chimiro chakafanana pachayo panoverengeka, paunenge uine chikamu chekutanga, banga, kana kupokana; uye chikamu chemhedzisiro iyo, neimwe nzira, inoita kunge iine magumo ayo anodzokorora kuteedzana kwakafanana kasingaperi kune mavara.
Kunyanya, mune ino nyaya iwe unowana zvinotevera:
Zviri pachena kuti chizvarwa chekutanga munhoroondo, kubvira mavambo evatambi anoudzwa, avo vana vanoonekwa uye vari kuzove ivo vanopokana mushure menguva yekusvetuka.
Pfundo, kana kupokana, ndicho chikamu chinonyanya kubhadharwa mumanovel nekuti ndiko kunoitika hunhu hwese hwenoverengeka. Uye, mune ino kesi, iro banga pacharo chizvarwa chechipiri chese kwaunoona mararamiro avo, kushungurudzika, chigumbu, kunyepa, nezvimwe.
Chekupedzisira, iyo end, iyo iri yakavhurika chaizvo uye inoteera iyo imwecheteyo patani kuti zvese zvidzokororwe Icho chizvarwa chechitatu, uko kunoonekwa kuti vana vari kuzoita zvikanganiso zvakafanana sevabereki. Uye kunyange izvi zvinovakurudzira kune izvo zvavanoita.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zveNhoroondo yesitepisi ndiwo masitepisi pachawo. Zviri nezve chisingafadzi chinhu, ndiko kusingaperi nekufamba kwemakore, uye chizvarwa, mushure mechizvarwa chinoramba chiri chinongedzo chemubatanidzwa wevavakidzani vese venzvimbo iyoyo.
Nekudaro, inoratidza zvakare kufamba kwenguva, sezvo pakutanga chitsva, kupenya masitepisi kunoonekwa, uye nekufamba kwenguva, uye pamusoro pezvose zvichienderera mugungwa rehurombo uye risingakwanise kumira, yakadyiwa, inova yakura, kuwedzera kumhanya.
Nenzira iyi, manera pachawo anova mumwezve hunhu iyo iripo muzvizvarwa zvese uye inofungisisa, mbeveve, hupenyu hwevamwe vatambi.
Mashoko akanyorwa naAntonio Buero Vallejo
Kana ndikashaya rudo rwako, ndichaita zvinhu zvakawanda.
Zvakanaka chaizvo kuona kuti uchiri kurangarirwa.
Usamhanye ... Pane zvakawanda zvekutaura nezvazvo ... Kunyarara kunokosha zvakare.
Ndinokuda nekusuwa kwako nekutambudzika kwako. kutambura newe uye kwete kukutungamira kune imwe nzvimbo yenhema yemufaro.
Vazvibvumira kukurirwa nehupenyu. Makumi matatu emakore apfuura nekudzika pamanera aya ... achiva mashoma uye akasviba mazuva ese. Asi isu hatizo bvumire isu pachedu kukundwa nenharaunda ino. Kwete! Nekuti tichabva pano. Tichatsigirana. Iwe uchandibatsira kusimuka, kuti ndisiye imba ino inosiririsa narinhi, idzi kurwa kusingaperi, matambudziko aya. Iwe uchandibatsira, handiti? Ndiudze hongu, ndapota. Ndiudze! (Mutsara kubva mubhuku «Nhoroondo yezvikwiriso»).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Pfupiso ye "Nhoroondo yezvikwiriso" naAntonio Buero Vallejo
Carlos Alonso Perez akadaro
Aitami pindura meee
Pindura Carlos Alonso Pérez